Utyelelo olumangalisayo lokuya eTamil Nadu KwiVisa yaseIndiya
Utyelelo olumangalisayo eTamil Nadu
Iindwendwe eziya eIndiya eziza I-India e-Visa yoKhenketho bachukunyiswe yiTamil Nadu yenye yezona ndawo zibalulekileyo zokutyelela eMazantsi eIndiya. Sigubungela iindawo ezi-5 eziphezulu eTamil Nadu.
IsiTamil Nadu ngu ilizwe elikhethekileyo eIndiya ibali lakhe elidlulileyo kunye nembali yenkcubeko eyahluke ngokupheleleyo kwezinye iIndiya. Zange iphinde ibe phantsi kolawulo loxinano olwaluza kwaye lwaya eNyakatho ye-India, kude kufike ixesha leBritish Tamil Nadu yayisoloko inembali kunye nenkcubeko yayo neyinxalenye ye-Impucuko yaseIndiya njengayo nayiphi na enye. Kodwa ngoxinzelelo olunje kulawula njengoko le Cholas, iiPallavas, neeCheras, elowo eshiya ngasemva kwilifa lenkcubeko namasiko alo, le milo yomtshato ngoku ibonakalayo yahlukile kwenye indawo eIndiya kwaye benza ukuba ilizwe libe lodwa kuphela kuhlobo lwalo. Nokuba yeyokundwendwela kwiitempile zakudala ezahlukeneyo okanye ukubona ngokubona komntu izinto ezimangalisayo ezakhiwe ngamabhodlo ombuso wakudala, abakhenkethi baya eTamil Nadu ngalo lonke ixesha enyakeni. Nazi ezinye zeendawo ezithandwayo onokundwendwela xa usendleleni ukuya eTamil Nadu engummangaliso.
Urhulumente wase-India wenze inkqubo ye-Visa ye-elektroniki kwi-Intanethi ebizwa ngokuba yi-eVisa India. Ungasifaka isicelo Indian Visa ekwi-Intanethi (eVisa India). I Isicelo seVisa saseIndiya Inkqubo ikwi-intanethi. Xa igosa elihambelayo lifumene imvume, i-eVisa ye-elektroniki yase-India yathunyelwa kwi-imeyile yakho ye-imeyile. Kule posi sinikezela ngomboniso wezinto ezi-5 eziphezulu ezithandwayo eTamil Nadu yababambe i-Visa yaseIndiya.
I-Nilgiri Mountain Railway, Ooty
Yaziwa nangokuthi Itoyi yoLoliwe yeOoty, I-Nilgiri Mountain Railway mhlawumbi Olona hambo lubalaseleyo lukhethekileyo onokuze uluthathe. Kukuthabatha kuhambo oluya kwiiNtaba zeNilgiri zaseTamil Nadu, okanye kwiiNtaba zeBlue, ezisasazeke kwiNtshona Ghats eNtshona Tamil Nadu. Iluhlaza kwaye iluhlaza, inenkungu yesibhakabhaka esiluhlaza, kwaye intle ngobuhle, ezi ntaba zikhangeleka ngokungathi ziphume kwipeyinti yomhlaba. Ukukhwela kuqala eMettupalayam kwaye kudlulela eKellar, Coonoor, Wellington, Lovedale naseOotacamund, kuthabatha iiyure ezingama-5 zizonke ukugubungela malunga neekhilomitha ezingama-45. Iimbono ezintle onokuzibona kulo lonke olu hambo ziya kubandakanya amahlathi aluhlaza, iitonela, inkungu nenkungu, imimango ebukekayo kunye nokukhanya kwelanga kunye nemvula. Uloliwe uyathandwa kwaye uyathandeka kangangokuba i-UNESCO ibhengezwe njengendawo yeLifa leMveli yeHlabathi.
Isikhumbuzo seVivekananda Rock, Kanyakumari
Kanyakumari, isekupheleni kweIndiya, elunxwemeni loLwandle lweLaccadive, yidolophu edumileyo abantu abayindwendwelayo kungekuphela ngenjongo yokundwendwela kodwa nokubona ubuhle bendawo yayo yolwandle. Ukuba undwendwela le dolophu nangasiphi na isizathu uya kuba ulungile xa ungahambanga ngaphandle kokundwendwela iVivekananda Rock Memorial ebekwe kwesinye seziqithi ezincinanana ezikufutshane nedolophu ephumela kuLwandle lwaseLakshadweep. Ungakhwela iphenyane eliya esiqithini, noluya kuba luhambo oloyikisayo, lukubonise ngoLwandlekazi lwaseIndiya ngasemva. Nje ukuba ufike, ungenza indlela eya eSikhumbuzweni. IVivekananda kuthiwa ifumene ukukhanya kwesi siqithi kwaye ngaphandle kokubaluleka kwesiqithi esikufumanayo ngenxa yobuhle baso obuthandekayo kubo bonke abasityelelayo.
I-Brahadeshwara Temple, Thanjavur
Le tempile ikwiTamil Nadu's Thanjavur yitempile enikezelwe kuNkosi Shiva ekwabizwa ngokuba ngamagama kaRajarajesvaram kunye noPeruvudaiyār Kōvil. Inye ye eyona ndawo idume ngokundwendwela eTamil Nadu ikwayenye ye eyona misebenzi idumileyo yoyilo lweDravidian. Indawo ye-UNESCO yeLifa leMveli yeHlabathi, itempile yakhiwa ngexesha lolawulo lukaDyakalashe waseChola kwaye yenye yezona zifa zihlala zihleli. Ijikelezwe ziindonga ezinqatyisiweyo, inendawo enkulu okanye is sanctum phakathi kwazo naziphi na itempile kulo lonke elaseIndiya kwaye igcwele iitawuli, imibhalo, kunye nemifanekiso eqingqiweyo enxulumene nezithethe ezahlukeneyo zobuHindu. Ngaphakathi kukho nezinto ezipeyinti ezivela kwixesha leChola kodwa kwiinkulungwane ezidlulileyo eminye imisebenzi yobugcisa ibiwe okanye ichithakele. Uyilo oluntsonkothileyo kunye nolwakhiwo itempile alunakuthelekiswa nanto kwaye uya kuzisola ngokusilela kuyo.
Itempile yaseMarudhamalai Hill, Coimbatore
Enye ye Iitempile ezaziwa kakhulu zeTamil Nadu, I-Temple yaseMarudhamalai Hill, emalunga ne-12 kilo yeemayile kude neCoimbatore, ikwindawo ephezulu ye-hokolela yentsimbi e-Western Ghats. Yakhiwa ngekhulu le-12 ngexesha leSangam kwaye yanikezelwa kwi-Lord Murugan, uthixo wamaHindu wemfazwe kunye nonyana kaParvati noShiva. Its igama libhekisa kwimithi yemarudha maram efumaneka ngokobumhlophe kwi-hillock kunye neMalai oko kukuthi induli. Uyilo lwayo luyamangalisa ngokwenyani- umphambili wetempile ugqunywe yimifanekiso eqingqiweyo yoothixo. Ngaphandle kovuyo lwayo lokwakha, le tempile ikwabizwa ngokuba ngamayeza e-Ayurvedic amayeza afunyanwa apha elinywa ngokwendalo.
Enye ye Iilwandle ezidume kakhulu eTamil Nadu, le ikujikeleze i-58 kilo yeemayile kude ne Chennai kwaye iyafikeleleka ngokulula. Ukujonga kwi-Bay ye-Bengal, ulwandle ludume ngokuqengqa amatye, imiqolomba, kunye nonxweme iitempile ezakhiwe ngexesha lePallava idolophu yaseMahabalipuram idume ngo. Ngaphandle kobuhle bayo obumangalisayo, isanti emhlophe yegolide elunxwemeni, kunye namanzi enzonzobila eluhlaza, unxweme lukwabonelela ngezinto ezinomdla ongazenza ngelixa undwendwela. Kukho ibhanki yengwenya ekufuphi eneengwenya ezingaphezulu kwama-5000, isikolo sobugcisa nesikroliweyo, iziko apho kukhutshwa khona ityhefu yenyoka, umnyhadala wokudanisa kanye ngonyaka, kunye neendawo zokuphumla ezahlukeneyo ukuze uphumle kwaye wonwabe kukutya okumnandi.
Ukuba ucwangcisa ukutyelela i-India, unokufaka isicelo se Indian Visa ekwi-Intanethi apha kwaye ukuba ufuna naluphi na uncedo okanye ufuna ingcaciso kufuneka uqhagamshelane nayo IDesika yoNcedo lweVisa yaseIndiya ngenkxaso kunye nesikhokelo.
Urhulumente wase-India uvumela abemi bamazwe angaphezu kwama-180 ngokomthetho ngamnye Indian Visa Ukufaneleka uvumelekile ukufaka isicelo Indian Visa ekwi-Intanethi (eVisa India) njengoko igutyungelwe kwi Indian Visa Ukufaneleka. eunited States, BaseBrithani, Italian, isiJamani, Swedish, French, Swiss ziphakathi kobuzwe obufanelekele i-Visa yaseIndiya eyi-Intanethi (eVisa India).
I-Visa yabakhenkethi yaseIndiya Kwi-Intanethi (i-eVisa India Tourist) isebenza ngokusemthethweni ukuba ufuna ukudibana nabahlobo okanye ukubona, okanye ukudibana ngokubanzi kwabahlobo, okanye inkqubo emfutshane yaseYoga eIndiya. Sebenzisa i I-Visa yeshishini laseNdiya Kwi-Intanethi (eVisa India Business) yohambo lohambo njengeentlanganiso, ukungena ngokuhlangeneyo, ukukhokela abakhenkethi, iiarhente zorhwebo okanye ukunxibelelana phakathi kweenkampani. Ukuba ucwangcisa utyando okanye udliwanano lwezonyango ungafaka isicelo I-Visa yezonyango yaseIndiya Kwi-Intanethi (eVisa India), ungahamba nesigulana ukuya eIndiya I-Visa ye-Indian Medical Attendant (i-eVisa India Gqiza Gqirha).
Ukuze kube lula kuwe, ukuze isicelo sakho singakhatywa, nqengqa I-Indian Visa yeemfuno zeFoto kwifoto yobuso bakho. Malunga nepasipoti yakho yiya kwi Iimfuneko zencwadana yokundwendwela yeVisa yaseIndiya ukuze ulayishe uhlobo olufanelekileyo lomfanekiso wakho Inkqubo ye-Visa yaseIndiya.
URhulumente wase-India ucebisa ngokufaka isicelo seVisa yaseIndiya ngoku ekwi-intanethi kwifomathi ye-elektroniki. Unokufaka isicelo se Indian Visa ekwi-Intanethi apha kwaye ukuba ufuna naluphi na uncedo okanye ufuna ingcaciso kufuneka uqhagamshelane nayo IDesika yoNcedo lweVisa ye-Intanethi yaseIndiya kunye neZiko leNkxaso ngazo naziphi na iingcaciso ezinxulumene ne-Indian Visa Online (eVisa India).